Lapho enza mqondo kufanele aqondiswe nezimfuneko ezithile kanye nezincomo. Isikhungo ngasinye usetha yayo, esekelwe neyaziwayo izilinganiso zikazwelonke. Yiziphi izimfuneko sokubhalisa mqondo, thina chaza kulesi sihloko.
Uma ugcwalisa ikhasi lesihloko kumele icacise igama lesikhungo (ngokugcwele), ubuhlakani, isihloko, igama umfundi kanye uthisha-umeluleki.
Okudingekayo yokubhaliswa mqondo. Amazinga ekucubunguleni Amasimu: kwesokudla - 10 mm, elingenhla kanye aphansi, - of 20 mm, washiya - 30 mm ... (Qaphela ukuthi lezi zibalo zingaphansi ukushintsha isinyathelo we nyuvesi, Nokho, izindinganiso ezintsha akufanele kube ngaphansi kuka-la manani akula ngenhla).
mqondo Ukubhala ukwenziwa iphepha elimhlophe kokuba A4.
Izimfuneko ukufometha mqondo (GOST) ziqukethe mayelana font hlobo. Nokho, ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa Times New Roman. Usayizi - 14 (kungaba futhi 12 kodwa akukho ngaphansi) Umbala - Black.
Isikhawu esetshenziswa phakathi imigqa - sesquihydrate.
Ikhasi izinombolo kufanele kwenziwe ezansi ishidi phakathi. Izimpawu zokubhala azisetshenziswa ekwakhiweni izinombolo, kanye lapho ebhalela sematheni.
Izidingo sokubhalisa mqondo. Kokuqukethwe, isakhiwo izakhi ezengeziwe
Kuleli khasi kubalulekile ukubhala amagama zonke izingxenye ezakha umsebenzi, kuhlanganise sub-izigaba futhi izigaba. Izicelo uhlu esetshenziswa izincwadi kanye neminye imithombo, njengoba kukhonjisiwe uhlu lokuqukethwe. Eceleni kwegama ngalinye udinga ukubeka phansi izinombolo zekhasi, okuyizinto kokuqala. Igama elithi "Okuqukethwe" Kulotshweni izincwadi ezinkulu maphakathi. Zonke imidwebo ayingxenye mqondo, kubalulekile ukuba asayine. Ngokwesibonelo, "Umfanekiso 8: Idivayisi". Isiginesha kumelwe ibekwe ngaphansi into ngokwayo, maphakathi. Inkomba uMdwebo ngempela khona mqondo umbhalo. Amathebula eziqukethwe embhalweni, ngemvume phezulu, ohlangothini lwesobunxele. Basuke etholakala ngokuqinile emva izixhumanisi kubo (noma ekhasini, lapho kukhona ngako, noma elilandelayo). Njengoba igama ofuna ukuyisebenzisa igama elithi "Uhlu" futhi isibalo saso negama (ngokuvumelana negama GOST akakwazi ukubhala, kodwa izikhungo ephakeme kanye secondary education amakhono khombisa e izimfuno zabo). Uma kukhona isidingo ukuhambisa into kwenye uhlu, qiniseka ukhombe entsha ukuthi kwenzekani.
Okudingekayo yokubhaliswa mqondo: amanothi, izicelo, amandla
Uma kudingeka, cacisa ulwazi olusetshenziselwa QAPHELA. Atholakala umbhalo ngokuqondile ngemva ulwazi oluyisisekelo, noma ngaphansi kwekhasi njengombhalo waphansi. Ingabe kanje: "Yazi: (umbhalo)". Uma ezingaphezu kweyodwa, kubalulekile ukuba uhlele uhlu, olunezinombolo ngezinombolo zesi-Arabhu. Izicelo zitholakala ekupheleni mqondo, e-oda lapho wabo ohlala kuso kuyakhulunywa ngaso umbhalo. Wonke la manani namathebula zitholakala kuzo, ibe negama ezifana "Figure A8." CAD Amazinga mqondo futhi aqukethe ulwazi sendlela ukubhalisa imithombo yezincwadi. Isibonelo: "Ivantsov, PT imisebenzi ngemali / PT Ivantsov - M:.. Sun 2014. - 521 nge."
Amur Othisha College, emzini Blagoveshchensk
RSUH: Masters amandla. Russian State University for the Humanities
Reykjavik - dolobha Iceland
"Isikole Ubuthakathi": abasebenzi Hogwarts
Ubusosha School Orenburg, Krasnodar, Tyumen, laseStavropol
3D MyRiwell isibambo - buyindlela innovative zokuphetha emoyeni
Umthamo sesikhashana ngendlela yesimanje bafudumale system
Long isiketi ngqo: izitayela, sibonisa Ukukhetha. Kusukela sizogqokani isiketi eside?
Le filimu "I lwemilando Narnia: Prince Caspian": nabalingisi izindima, sakhiwo, ukubuyekezwa
Baking imvubelo inhlama - ukulungiselela wonke umndeni!
Ihhotela Private, Dzhubga. Ihhotela ngasoLwandle - phambili ngezibuyekezo nezithombe
Batler Dzhimmi: basketball umdlali kusukela NBA league ithimba "Bulls Chicago"